​नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा ४ बर्षका लागि महेश गुरागाईं नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा महेश गुरागाईं नियुक्त भएका छन् । तत्कालनी अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले राजिनामा दिएपछि अर्थमन्त्रालयले गुरागाईंलाई चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष गुरागाईंले..
​साउदीका नेपाली कामदारले अब अनलाइनबाटै पासपोर्ट आवेदन दिनसक्ने
साउदी अरब । साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली कामदारले अब नयाँ राहदानी ९एमआरपी० का लागि आवेदन फारम भर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन्। रियादस्थित नेपाली दूतावासले द्रुत सेवामा पासपोर्ट उपलब्ध गराउन आइतबारदेखि लाइभ..
​मलेसियाले विदेशी कामदारबाट लिँदै आएको लेभी शुल्कमा वृद्धि गर्‍यो
काठमाडौं । मलेसियाले विदेशी कामदारबाट लिँदै आएको लेभी शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा उसले शुल्क बढाएर २५ सय रिंगिट पुर्‍याएको छ । यसअघि प्रति कामदार वार्षिक..
​विदेश जानेको संख्या ६ महिनामा ६१ हजार घट्यो, कुन महिना कतिले घटे ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउनदेखि पुससम्म गएको वर्षको यही अवधीमा भन्दा ६१ हजार १८ जना कम कामदार..
​कम्पनीले तलब नदिदाँ साउदीमा ३०० नेपाली कामदारको बिचल्ली
साउदी अरब । रोजगारदाता कम्पनीले काम गरेको तलब नदिँदा रोजगारीका लागि साउदी अरब आएका करिब ३०० नेपाली बिचल्लीमा परेका छन् । साउदी अरबको दमामस्थित साद सह्मी अल हजारी कम्पनीमा कार्यरत नेपाली..
काठमाडौं । जनपद तर्फको प्रहरी जवान पदमा ठूलो संख्यामा भर्ना खुलेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकास विभाग भर्ना तथा छनौट शाखाका अनुसार ५ हजार ४४ जनाका लागि भर्ना..
सेती नदीमाथि अवस्थित सयौं वर्ष पुरानो आश्चर्यजनक प्राकृतिक पुल उचित प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा
हरि बास्तोला पोखरा । पर्यटकीय सहर पोखराको सेती नदीमाथिको प्राकृतिक पुल ओझेलमा परेको छ । पर्यटकीय नगरी पोखराको दक्षिणी भेगस्थित पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं १७ महतगौडा र वडा नं १५ स्थित..
​बन्द खुलेपछि जनकपुर आउने भारतीय पर्यटकहरु बढे
जनकपुरधाम । विगत ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको तराईमा यातायात सेवा सञ्चालनमा आएपछि भारतीय पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ । धार्मिक पर्यटनको एक प्रमुख गन्तव्य स्थलको रुपमा स्थापित हुने..
​साउदीमा एक वर्ष भित्रमा २७७ नेपाली कामदारको मृत्यु
साउदी अरब । पछिल्लो समय नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको साउदी अरबमा दैनिक सरदर एक नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ । रियादस्थित नेपाली दूतावासको तथ्याङ्कअनुसार साउदीमा दैनिक औसत..
उच्च पदस्थ ६३ जना माथि अख्तियारको छानबिन
काठमाडौं । अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला ६३ उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि छानबिन थालेको छ । नेपाल सरकारका ६ सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका १५ जना, सात महानिर्देशकसहित प्रथम श्रेणीका..
करर्पोरेट हाउसमा जागिर खानको लागि बैंकर अनिल शाहका केही टिप्स
काठमाडौं । अहिले प्रतिष्ठित निजी कर्पोरेट हाउमा जागिर खान निकै गाह्रो छ । अवसर कम र जनशक्ति धेरै भएकाले जागिर पाउन मुस्किल छ । निजी संघसंस्थामा जागिर खान जाँदा सबैभन्दा..
​‘मुन्द्रे’ नेपाल वायु सेवा निगमको ब्राण्ड एम्बेस्डर
काठमाडौं । हाँस्य कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे) नेपाल वायु सेवा निगमको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त भएका छन् । निगमले सोमबार आफ्नो तीन वर्षे सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मुन्द्रेलाई ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त गरेको..
​दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निगमको योजना
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्नेसहित आफ्ना सेवा सुधारका तीनवर्षे कार्ययोजना ल्याएको छ । आगामी २०७३ साल मङ्सिरमा पहिलो वाइडबडी र माघमा दोस्रो वाइडबडी विमान खरिद गर्ने..
​पोखरामा साहित्य महोत्सव हुने
पोखरा । नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पाँचौँ संस्करण पर्यटकीय नगरी पोखरामा आगामी माघ १५ गतेदेखि नेपाल टुरिजम बोर्डको कार्यालय परिसर, पार्दीमा हुने भएको छ । बुकवर्म फाउन्डेसनको आयोजना एवम् ¥यान्डम रिडर्स सोसाइटीको..
नेपालका उत्कृष्ट होटलमा कुन कुन होटल परे टप टेनमा
Posted on Jan 24 2016
काठमाडौं। पर्यटन सम्बन्धी वेबसाइट ट्रिप एडभाइजर डटकमले ट्राभलर च्वाइसका आधारमा सन् २०१६ मा नेपालका १० उत्कृष्ट होटलको सूची सार्वजनिक गरेको छ। ट्रिप एडभाइजरले पर्यटकको बसाई, सन्तुष्टि, आकर्षक सुविधा, होटलका कर्मचारीको..
​सम्पदा पुनःनिर्माण गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई तालिम
काठमाडौँ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण सम्पदाको पुनः निर्माण गर्ने जनशक्ति तयार पार्न तालिम दिइएको छ । नर्वेली सरकारको सहयोगमा पुरातत्व विभागले सम्पदास्थलका ढुङ्गा र काठलाई..
नयाँ ट्याक्सी दर्ताका लागि ५०० जना छानिए (क-कसले पाए नामावलीसहित)
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीमा साना ठुला सवारी अन्तर्गत नयाँ ट्याक्सी दर्तामा परेका ६ हजारबढी आवेदनमध्येबाट ५०० थान ट्याक्सी गोलाप्रथाबाट चयन गरिएको छ । स्वरोजगार मजदुर तर्फ ट्याक्सी दर्ताका लागि..
​चन्द्रागिरी केबलकार नयाँ बर्षमा शुरु, निर्माण संचरनाको ९० प्रतिशत काम सकियो
काठमाडौं । काठमाडौं फन पार्क लिमिटेडले चन्द्रागिरीमा निर्माण गरिरहेको केबलकार, मन्दिर, भ्युटावर लगायत संचरनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ। आगामी वैशाख १ गतेबाट व्यावसायिक रुपले केबलकार सञ्चालन गर्ने गरी काम..
​हिमपात मै दौड अभ्यास, यस्तो छ कारण
जुम्ला । जुम्लामा भारी हिमपात भएपछि दैनिक हुने अधिकांश काम रोकिए पनि एथलेटिक्स धावकहरुले भने दौड प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिएका छन् । क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि धावक हरिबहादुर रोकायासँग..
​चीनबाट छिट्टै ४ वटा जहाज ल्याउने, ३ वटा अन्र्राष्ट्रिय र १७ वटा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने- पर्यटन मन्त्री
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको हवाई सुरक्षा विश्वासिलो बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र घुरेलु विमानस्थल दुबैलाई बलियो बनाएर लैजाने तयारी गरेको छ । सिन्हवा समाचार समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीनबीचको उड्डयन सहकार्यः..
​पर्यटकीय स्थल निर्माणका लागि मूर्तिकला उद्यान
काठमाडौं । खुला स्थानमा मूर्तिकलाअनुसारका मूर्ति कोरी आकर्षक पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने उद्देश्यले इटहरी उपमहानगरपालिकाको तालतलैयाभन्ने स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला आयोजना गरिने भएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा माघ..
​पाँच हजारलाई तालिम र रोजगारी दिन मेला
काठमाडौं । यतिवेला भृकुटिमण्डपमा हजारौँ बरोजगार युवाको ताँती छ भने तालिम दिनका लागि ६५ वटा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू स्टल राखेर बसेका छन् । पाँच हजारभन्दा बढी युवाले निस्शुल्क तालिम पाउने..
​ताइवानको बजार मेलामा नेपाली व्यवसायी
काठमाडौँ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र हस्तकलासहितका सामग्रीको बजार प्रवद्र्धन गर्ने अभिप्रायले यहाँका पर्यटन व्यवसायीले ताइवानमा हुने ‘ताइवानी नयाँ वर्ष बजार मेला’मा सहभागी हुने भएका छन् । यही माघ ७ देखि..
​नेपाल विश्व पर्यटनको आकर्षण गन्तव्य बन्दै
सिबी अधिकारी काठमाडौँ । ट्राभलसम्बन्धी अमेरिकी वेबसाइड रफगाइड्सले सन् २०१६ मा घुम्नैपर्ने १० देशको सूचीमा नेपाल पहिलो नम्बरमा राखेको छ । बेलायतको एक प्रकाशक कम्पनीले पनि हालै नेपाललाई विश्वका भ्रमणयोग्य मुलुकको प्रथम..
विश्व कै उत्कृष्ट साहसिक गन्तव्यमा अन्नपूर्ण सर्किट - द गार्डियन बेलायत
काठमाडौं । बेलायतबाट प्रकाशित हुने विश्वविख्यात पत्रिका द गार्डियनले नेपाललाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा अघि सारेको छ । पत्रिकाले साहसिक पर्यटनका लागि छानेका १० उत्कृष्ट गन्तव्यमा नेपाल पनि परेको हो..
​नाट्टा कार्यसमितिको निर्वाचनमा मधुसुदन आचार्यको प्यानल विजयी
काठमाडौ । नेपाल एसोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् ९नाट्टा० मा मधुसुदन आचार्यको प्यानल विजयी भएको छ।काठमाडौँको याक एन्ड यतिमा भएको ५२ औँ साधारणसभा तथा नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा शम्भुराज..
​मिसन पर्यटन पाँच ‘चर’ र सात ‘स’ अवधारणा
काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको दरिलो आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पाँच ‘चर’ र सात ‘स’को नयाँ अवधारणाको आवश्यकता औँल्याइएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट थलिएको पर्यटनलाई गति दिन विगतका वर्षमा..
​कृषि विकास बैंकमा जागिर पाउनको लागि बैंक सिइओ लीलाप्रकाश सिटौलाका केहि टिप्स
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकमा चौथो र पाँचौँ तहका लागि आवेदन माग भएको छ । आवेदन भर्ने सबैलाई कृषि विकास बैंकमा जागिर खाने चाहना होला, तर सबैको चाहना भने पूरा..
​देवघाटमा भक्तजनको घुइँचो, तराईवासीको सङ्ख्यामा कमी
चितवन । तराई आन्दोलनको प्रभाव माघे सङ्क्रान्ति मेलामा पनि परेको छ । पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा गएरातिदेखि नै भक्तजनहरुको ठूलो सहभागिता रहेको छ । यद्यपि अघिल्ला वर्षको तुलनामा तराईवासीको उपस्थितिमा भने..
​पर्यटन बोर्डले सन् २०१६ लाई राष्ट्रिय पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने
काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सङ्क्रमणमा परेको मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विशेष योजना ल्याउने भएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिन बोर्डले सन् २०१६ लाई..
Results 845: You are at page 23 of 29